Rayson e Rayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Imikhiqizo eyinhloko Umhlinzeki Ohamba Phambili We-Memory Foam One-Foam ongu-10Inch
Lo mkhiqizo une-anti-bacterial kakhulu. Izinto zayo eziqukethe impahla yokususa umswakama zingasiza ngokuphumelelayo ukuvimbela ukukhula kwamagciwane abangela iphunga ezinyaweni.
I-Rayson Global Co., Ltd iyinhlangano ehlanganyelwe yeSino-US, eyasungulwa ngo-2007 etholakala eShishan Town, Foshan High-Tech Zone, futhi yakhiwe eduze kwamabhizinisi adumile afana ne-V.
Kuze kube manje, uRayson usephase isitifiketi sohlelo lokuphatha ikhwalithi yamazwe ngamazwe. Yonke imikhiqizo kuhlanganisa nomkhiqizo wethu omusha ihlinzekwa ngomklamo omusha, ikhwalithi eqinisekisiwe, nezintengo ezincintisanayo. Ngemva kweminyaka yokuthuthuka, sesisungule ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside namakhasimende ethu emhlabeni wonke. Sicela uqiniseke ukuthi sinelungelo lokuthekelisa imikhiqizo yethu futhi ngeke kube khona umonakalo owenzekile ezimpahleni ezilethiwe. Samukela ngobuqotho imibuzo yakho kanye nocingo. Ngemigqa yokukhiqiza ephelele nabasebenzi abanolwazi, uRayson angakwazi ukuklama, ukuthuthukisa, ukwenza, nokuhlola yonke imikhiqizo ngendlela ephumelelayo ngokuzimela. Kuyo yonke inqubo, ochwepheshe bethu be-QC bazogada inqubo ngayinye ukuze baqinisekise ikhwalithi yomkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, ukulethwa kwethu kufike ngesikhathi futhi kungahlangabezana nezidingo zawo wonke amakhasimende. Sithembisa ukuthi imikhiqizo ithunyelwa kumakhasimende iphephile futhi iphilile. Uma unemibuzo noma ufuna ukwazi okwengeziwe mayelana yethu, sishayele ngqo. Kusukela yasungulwa, iRayson ihlose ukuhlinzeka ngezixazululo ezivelele nezihlaba umxhwele kumakhasimende ethu. Sisungule eyethu i-R&D isikhungo sokuklama umkhiqizo nokuthuthukiswa komkhiqizo. Silandela ngokuqinile izinqubo ezijwayelekile zokulawula ikhwalithi ukuze siqinisekise ukuthi imikhiqizo yethu ihlangabezana noma idlula lokho okulindelwe ngamakhasimende ethu. Ngaphezu kwalokho, sinikezela ngezinsizakalo zangemva kokuthengisa kumakhasimende emhlabeni wonke. Amakhasimende afuna ukwazi okwengeziwe ngomkhiqizo wethu omusha noma inkampani yethu, mane asithinte.
Yiziphi izindlela zokukhokha ozamukelayo? I-LC ngokubona / nge-TT, i-30% ye-Deposi kanye nebhalansi engu-70% iphikisana namakhophi wemibhalo yokuthumela i-witinin izinsuku zokusebenza ezingu-7. Ungawukhipha kanjani umatilasi ogoqiwe? 1.Beka ikhathoni endaweni eyisicaba ekamelweni lakho, khipha umatilasi ngokucophelela ubeke phezu kombhede wakho. 2.Sika ngokucophelela isikhwama sangaphandle ngesikelo uqinisekisa ukuthi awusiki upulasitiki omubi ngaphakathi noma umatilasi, ungamangaleli ummese. 3.Goqela umatilasi ovalwe ngevacuum phezu kombhede wakho 4.Sika ngokucophelela isikhwama sepulasitiki eduze kwewashi njengoba umatilasi uqala ukuwohloka ngaso leso sikhathi,Susa isikhwama sepulasitiki. 5.Vumela amahora angu-24 ukuze umatilasi wakho omusha ukhule ngokugcwele.Ngingakwazi yini ukuvakashela imboni yakho? Yebo, siyakwamukela ukuvakashela imboni yethu nganoma yisiphi isikhathi, siseduze nesikhumulo sezindiza samazwe ngamazwe sase-Guangzhou Baiyun, kuthatha ihora elilodwa nje ngemoto, futhi singahlela imoto ukuthi ikulande.
Ihlala ilwela ukwenza kahle, uRayson usethuthuke waba yibhizinisi eliqhutshwa yimakethe neligxile kumakhasimende. Sigxile ekuqiniseni amakhono ocwaningo lwesayensi kanye nokuqedela amabhizinisi esevisi. Simise umnyango wesevisi yamakhasimende ukuze unikeze kangcono amakhasimende amasevisi asheshayo okuhlanganisa nesaziso sokulandelela i-oda. I-kurlon angelica Rayson ingumkhiqizi obanzi kanye nomphakeli wemikhiqizo yekhwalithi ephezulu kanye nesevisi eyodwa-stop. Sizohlinzeka, njengenjwayelo, ngenkuthalo izinsizakalo ezisheshayo ezinjalo. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe mayelana ne-kurlon angelica yethu neminye imikhiqizo, vele usazise.U-Rayson wenza uchungechunge lwezivivinyo zekhwalithi. Kubandakanya isheke lokulinganisa kwezindwangu, ukungaguquki kombala, isheke lokunamathela (amalogo, ithegi, ilebula yokunakekelwa), isheke lomonakalo womthungo, njll.